China Intelligent Constant Temperature Water Bath ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Constant Temperature Water Bath Instrument ဖြစ်သည် > စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် Water Bath > Intelligent Constant Temperature Water Bath ဖြစ်သည်
Intelligent Constant Temperature Water Bath ဖြစ်သည်
Intelligent constant temperature water bath constant bath bath သည်ရေနံဓာတုဖိုင်ဘာပလတ်စတစ်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသောကိရိယာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုနမူနာသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တွင်အဆက်မပြတ်အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တွင်အမြဲအပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း (check in) အတွက်ရေချိုးခန်းအတွင်း၌အချိန်နှင့်တပြေးညီတုံ့ပြန်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ စမ်းသပ်ရန်အပူထိန်းရေချိုးခြင်းစနစ်သည် PID အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မျက်နှာပြင်ကြီး LCD display ကိုသုံးသည်။ ၎င်းကိုဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ ဆေးပညာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ကာယဓာတုဗေဒ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုခြင်း၊ ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်တူရိယာများ၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများစသည်ဖြင့်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။
The ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအပူချိန်ရှိသောရေဖြင့်ရေချိုးခြင်းအမြဲမပြတ်အပူချိန်ရေချိုးခြင်းသည်ရေနံဓာတုစက်ရုံ၊ ဓာတုဖိုင်ဘာပလတ်စတစ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အထူးပြုလုပ်ထားသောကိရိယာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုနမူနာသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တွင်အဆက်မပြတ်အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်တွင်အမြဲအပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း (check in) အတွက်ရေချိုးခန်းအတွင်း၌အချိန်နှင့်တပြေးညီတုံ့ပြန်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ စမ်းသပ်ရန်အပူထိန်းရေချိုးခြင်းစနစ်သည် PID အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မျက်နှာပြင်ကြီး LCD display ကိုသုံးသည်။ ၎င်းကိုဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ ဆေးပညာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ကာယဓာတုဗေဒ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုခြင်း၊ ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များ၊ အီလက်ထရောနစ်တူရိယာများ၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများစသည်ဖြင့်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။
1. ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအပူချိန်ရှိသောရေဖြင့်ရေချိုးခြင်း Introduction
(၁) အပူပေးရေချိုးခြင်းသည်နှစ်ဖက်လုံးတွင်ပွင့်လင်းပြီးအပူထိန်းရန်အရည်၏အရောင်၊ စီးဆင်းမှုနှင့်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကိုသတိပြုနိုင်သည်။
(၂) မျက်နှာပြင်ကြီး LCD display၊ PID အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု
(၃) Fully enclosed compressor ကိုအအေးခံရန်သုံးပြီးအပူချိန်လျင်မြန်စွာကျဆင်းသည်။
(၄) microcomputer အသိဥာဏ်ထိန်းချုပ်စနစ် သုံး၍ အပူချိန်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခြင်း၊ အပူချိန်တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုလွယ်ကူခြင်း
2. ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအပူချိန်ရှိသောရေဖြင့်ရေချိုးခြင်း Parameter
အပူချိန်အကွာအဝေး („ ƒ)
ဒစ်ဂျစ်တယ် display resolution (â„ ƒ)
အပူချိန်အပြောင်းအလဲ (flu â„ ƒ)
အလုပ်လုပ် tank ပမာဏ
၂၅၀ × ၂၀၀ × ၃၅၀
၁၉၈ × ၁၄၀
ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအပူချိန်ရှိသောရေဖြင့်ရေချိုးခြင်း is widely used in drying, concentration, distillation, impregnated chemical reagents, impregnated drugs and biological agents, can also be used for water bath constant temperature heating and other temperature tests, is biology, genetics, virus, aquatic products, environmental protection, medicine, health, biochemical laboratory, analysis room education and scientific research necessary tools.
မေး။ ။ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက Intelligent Constant Temperature Water Bath ကိုဘယ်နှနှစ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလဲ။
hot Tags:: Intelligent Constant Temperature Water Bath, China, Factory, Cheap, Advanced, Manufacturers, Suppliers, Price, CE
Intelligent Digital Display သည် Constant Temperature Water Bath ဖြစ်သည်
အချိန်မှန်မှန်အပူချိန် Porous Water Bath